China Model No: Chinese rụpụta Akpaaka Control Y83 Series Hydraulic Metal Mgbawa Briquetting Press Machine maka Metal Recycling factory na suppliers | Jikọọ Top
Model No: Chinese rụpụta Automatic Control Y83 Series Hydraulic Metal Mgbawa Briquetting Press Machine maka Metal imegharị ihe maka iji
Y83 usoro haịdrọlik metal achicha crumbs igwe na-bụ-eji maka nchara nchara, ígwè mwepụ.
Ihe mkpofu ọla kọpa na nke aluminom na ihe ndị ọzọ na-akwụ ụgwọ nke mgbatị dị elu
ikwado imegharị ihe maka iji na-agbaze, karịsịa mgbe suppression nke ọzọ igba ígwè igba Iron.
.Dị Y83 usoro
Nsogbu hydraulic 180-3000 Tọn
.Dị Kwụ ma ọ bụ vetikal ụdị
Ogo Briquette Omenala
Ọrụ Njikwa PLC
Hydraulic scrap metal chip briquetting press igwe nwere ezigbo uru maka ụlọ ọrụ mgbazigharị ígwè. N'oge a, ụkọ nke ihe ndị dịnụ bụ nsogbu mba ọ bụla na-eche ihu. N'agbanyeghị mba na-emepe emepe ma ọ bụ mba ndị mepere emepe, otu esi emegharị kachasị mma bụ isiokwu dị ọkụ. Ya mere, anyị na-echepụta ụdị vetikal ma ọ bụ ụdị hydraulic scrap metal chip briquetting igwe igwe maka ndị ahịa anyị iji mesoo ígwè ha wepụ ihe iji zute ihe ndị ahịa anyị chọrọ.
A na-ejikarị ígwè ọrụ mpempe ihe mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ maka ịpị ụdị ihe mkpofu ígwè niile (nkedo ígwè, ọla kọpa, aluminom, wdg) n'ime ihe nkedo, nke dị mfe maka njem na ọgwụgwọ nke ihe mkpofu ígwè. Hydraulic scrap metal chip briquetting press machine bụ ezigbo akụrụngwa maka ụlọ ọrụ ọla kọpa na ígwè, nke na-abụghị ígwè.
●A haziri usoro ahụ tupu ịtọpụ mmiri iji kpochapụ ujọ hydraulic.
Equipment Ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa, iji hụ na mkpapụta onye ọrụ.
A-part Akụkụ eletriki na-anabata PLC usoro nchịkwa na-arụ ọrụ.
Isi ahụ na-anabata usoro nchara ígwè dum, ike dị elu, ezigbo nkwụsi ike, adịghị mkpa ịwụnye ihe nkedo.
● Hydraulic scrap metal chip briquetting press machine na-anabata nnyefe nke hydraulic, nnukwu ọkachamara dum, na-asọba ọwa, nke mere na ọnwụ nke usoro ahụ dị ntakịrị, wepụ ihe ọghọm nke nkwụsị.
● Na-anakwere valvụ ụgbọ mmiri, valvụl-hydraulic nke kwekọrọ na ya na nhazi usoro mmanụ, nke mere na usoro hydraulic zuru oke, ọbụlagodi na ibu dị ogologo oge, usoro ahụ agaghị apụta na ọ gaghị achịkwa.
● Igwe igwe igwe haịdrọlik nwere ike inyere gị aka ịchekwa ọrụ, melite mgbake igwe, bulie ọnụahịa ire ma melite uru.
● Ndị ahịa nwere ike ịhazi nkọwa nkwakọ ngwaahịa na nha dịka mkpa ha si dị.
Hydraulic Scrap Metal Mgbawa Briquetting Press Machine Nkọwa：
Hydraulic scrap metal chip briquetting press machine nwere ihe ngosi ederede enwere ike ịhazi ya, usoro ihe na oge ọ bụla nke PLC na-achịkwa ya kpamkpam, enwere ike gbanwee ya n'oge ọ bụla site n'aka onye ọrụ, dị mfe, dị mfe ma dịkwa mfe nghọta.
4. Onye ebu
Hydraulic scrap metal chip briquetting press igwe nke eji ebu ya, o nwere ike ịghọta nri na-akpaghị aka, nwekwuo ikike ụbọchị ọ bụla ma chekwaa ike mmadụ.
Igwe hydraulic isi bụ isi na-ekpochapụ ihe nkedo nchara ma wepụ ihe ize ndụ nchekwa. Gbaa mbọ hụ na ndụ ọrụ na nchekwa nke akụrụngwa. Abịa na ebu ebu na ebu, ịpị top site ọkachamara imewe na elu nhazi ikike bụ nkwa nke magburu onwe uto nke akụrụngwa. Onu ogugu nke ebu na ndi oru akuko nwere oke ike na-eguzogide ígwè nke nwere ike dochie ya ngwa ngwa. N'ihu ihu nke ihe nlereanya LINDUR punch nwere eriri mgbanaka na-eguzogide ọgwụ maka mbibi na ntinye dị mfe, ka ndụ ya wee gbatịkwuo. Akụkụ ndị dị mkpa ka gbasiri ike ma ọ bụ mebie ebe ọ dị mkpa.
Hydraulic scrap metal chip briquetting press machine mejupụtara moto, mgbapụta nke hydraulic, ngwaọrụ nchedo mgbapụta, njikwa njikwa ọkachamara na usoro ọkpọkọ ejikọrọ na ngọngọ pịa. Ezi uche imewe, anụ mma. Onwem na obi jụrụ usoro, iji zere akụrụngwa ike ịrụ ọrụ nọgidere n'ihi mmanụ okpomọkụ ekpo oke ọkụ.
Mmepụta （ton / awa）
Ngwunye igwe eji arụ ọrụ ụgbọ mmiri anyị na-enye akụrụngwa a ma ama, anyị na ọtụtụ ndị a ma ama na-azụ ahịa, dị ka SIEMENS, NOK OMRON, SCHNEIDER, CHINT, MITSUBISHI na ihe karịrị afọ 10.
Anyị Hydraulic scrap metal mgbawa briquetting pịa igwe na ọtụtụ-eji na-eso ụlọ ọrụ:
● Anyị igwe ihe nkedo nke igwe na-arụ ọrụ briquetting igwe kwesịrị ekwesị maka nnukwu ụlọ ọrụ ígwè,
A-Nnukwu foundry ifufe ike mmiri foundry ụlọ ọrụ.
Ndị na-emepụta ọla kọpa na aluminom.
Hydraulic scrap metal chip briquetting press igwe na-arụ ọrụ ụkpụrụ bụ site na ndepụta silinda ebu aka site na hopper ịgbakwunye ihe eji arụ ọrụ, mee ka elu na-anwụ ala mgbali na ihe onwunwe na-abịakọrọ na usoro ntọala ma laghachi 1 ~ 2 sekọnd, na-ebudata, na-agbanye mmanụ na-alaghachi na mmanụ. ebe, n'okpuru elu ịnwụ ga-anwụ set nke metal briquetting extrusion uji eze, pushing n'ihu cylinder ga ẹkedori oghere, briquetting mgbali cylinder laghachi okirikiri na-esote ọrụ. Arụ ọrụ: silinda nri dị elu na ihe nrụgide cylinder (nna ukwu) na-agbadata ala, ihe nrụpụta ihe na-alọghachi 1 ~ 2 sekọnd - ị na-atụ anya mmanụ mmanụ (anwụrụ anwụrụ anwụrụ) na-atụ anya ịlaghachi - mgbali elu na-agbada mgbali elu nke - na-agbanye cylinder. ulo oru n'ihu larịị nsogbu mpempe - ihe nri cylinder alaghachi, n'ime ọzọ ọrụ okirikiri.
Anyị ga-eji ngwugwu ihe nkiri fụchie na nkwakọ osisi iji kpuchido igwe akụrụngwa hydraulic scrap metal chip briquetting machine.
Lelee Hydraulic Scrap Metal Chip Briquetting Press Machine maka Igwe Ntugharị Igwe na Omume!
Nke gara aga: Model No: Chinese rụpụta Q91Y Series Hydraulic scrap metal oké ọrụ shiee igwe
Osote: Model No: Chinese rụpụta Automatic Control Y81 Series Hydraulic Scrap Metal Press Aluminium Baler Machine maka Metal Press imegharị ihe maka iji
Briquetting Press igwe
Agụba Shear Maka Mobile Digger, Metal Powder Briquette Machine, Ọla kọpa Scrap Baler, Kwụ Baler Aluminium Scrap Press Machine, Hydraulic Baler / Aluminium Nwere Ike Press Machine, Mpempe akwụkwọ Metal Baler,